Raysalwasaarihii hore ee Thailand oo maxkamad loo soo taagay dilka dad mucaarid ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Raysalwasaarihii hore ee Thailand oo maxkamad loo soo taagay dilka dad mucaarid ah
Raysalwasaarihii hore ee Thailand oo maxkamad loo soo taagay dilka dad mucaarid ah
Raysalwasaarihii hore Abhisit Vejjajiva oo maxkamada la horkeenay
Raysalwasaarihii hore ee dalka Thailand Abhisit Vejjajiva iyo kuxigeenkiisii Suthep Thaugsuban ayaa maxkamada Bangkok looga yeeray ayadoo loo heysto dilka dadkii mucaaridka ahaa ee sanadkii 2010 ay ciidamada dowlada ku dileen bananbaxyadii dalkaasi ka dhacay.
Raysalwasaarihii hore ayaa loo heystaa inuu amarka bixiyey in ciidamada awood u adeegsadaan mucaaridkiisa kasoo horjeeday xiligii uu xafiiska hayey ee sanadkii 2010-kii.
Wakhtigaasi oo ay dadka kasoo horjeeda xukuumadii Abhisit ay magaalada Bangkok ka dhigayeen banaanbaxyo muddo todobaadyo ah socday, ayadoo mudaharaadyadaasi ay ku dhinteen dad gaaraya 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 1.900 oo ruux.
Abhisit iyo kuxigeenkiisii Suthep ayaa labaduba iska fogeeyey dacwada lagu soo oogay, ayagoo maanta la horkeenay maxkamada magaalada Bangkok ee caasimada dalkaasi Thailand.
Dadka la laayey ayaa u badnaa Kacdoonkii Funaanadaha Casaanka (Guduudan) oo ahaa taageerayaashii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Thaksin Shinawatra ayaa xiligaasi codsanayey in doorasho xor ah ay dalkaasi ka dhacdo.
Doorashooyinkii dhacay sanadkii kuxigay ee 2011-kii ayaa waxaa markale awooda dalkaasi la wareegay xisbigii Thaksin Shinawatra, waxaana xilka Raysalwasaaraha qabatay hogaamiyahaas walaashiis Yingluck oo ayadu hada xilka heysa.